कसरी पत्ता लगाउन आईडी Vkontakte
म आईडी Vkontakte कसरी थाहा छ? यो मुद्दा ढिलो होस् वा पछि यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई हुन सक्छ। प्रत्येक व्यक्ति Vkontakte दर्ता, यसको आफ्नै नम्बर वा परिचय छ (पहिचान नम्बर), प्रयोगकर्ता छ, वा बरु दर्ता समयमा आफ्नो पृष्ठ। यो पृष्ठ डिजाइन आईडी फेला पार्न सजिलो थिए।
म मेरो आईडी Vkontakte कसरी थाहा छ? यो धेरै सरल बनाउन। यो गर्न, आफ्नो पृष्ठ खोल्न र बायाँ स्तम्भ विकल्पहरू मा: मेरो घर, मेरो चित्र, मेरो मित्र, र यति मा, वस्तु मेरो सेटिङ फेला पार्न। उद्घाटन पछि, "पृष्ठ ठेगाना" तल सार्नुहोस्। बोल्ड संख्यात्मक मान र अन्त ठेगाना पहिचान नम्बर हो। यसबाहेक, पहिचान नम्बर तपाईं उदाहरणका लागि, आफ्नो पृष्ठ खोल्न जब ब्राउजरको ठेगाना पट्टी मा देख्न सकिन्छ, vk.com/id123456
एल्बम फोटो मात्र मित्रहरुलाई हेर्न मिल्ने संग - कहिलेकाहीं यो लुकेको पृष्ठ, यसलाई हेर्न सामान्यतया, अन्य प्रयोगकर्ता Vkontakte को अद्वितीय संख्या निर्धारण गर्न आवश्यक हुन्छ। यस मामला मा, तपाईं प्रयोगकर्ता आईडी को पृष्ठ खोल्न र ब्राउजर पट्टी देख्न आवश्यक छ।
छैन त लामो पहिले छैन जो पृष्ठको आईडी र आईडी आवश्यक जहाँ लागू हुँदैन पत्र फारम (उपनाम, नाम, थर), यसको व्यक्तिगत नम्बर प्रतिस्थापन गर्न संभावना थियो। के व्यक्तिगत नम्बर एक नम्बर र पत्र पद छैन भने, उदाहरणका लागि, vk.com/ivanov र कसरी बाहिर यो मामला मा फेला पार्न आईडी Vkontakte? तपाईं धेरै तरिकामा कार्य गर्न सक्छ।
इच्छित प्रयोगकर्ता पृष्ठ खोल्दै, खण्ड "मित्र" जाने र यसलाई खोल्न। हामी ठेगाना पट्टीमा आईडी प्राप्त।
बरु गर्न "मित्र" तपाईं तस्वीर मा, यदि तिनीहरूले लुकेको छैन साथै अडियो, भिडियो, वा टिप्पणीहरू रूपमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ जाँदै को - सबै अवस्थामा, ब्राउजर को कदर तथ्याङ्कले खुल्नेछ।
के अन्य तरिका यसको शाब्दिक प्रतिस्थापन मा आईडी Vkontakte पाउन सकिन्छ? तपाईं इच्छित पृष्ठ खोल्न पर्छ मुख्य छवि र दायाँ-क्लिक आफ्नो कर्सर hover। अर्को, यो देखि खसेको सूची चयन तपाईँको ब्राउजर आधारमा:
गुगल क्रोम - "नयाँ ट्याबमा खोल्नुहोस् छवि"
ओपेरा - "छवि गुण"
मोजिला फायरफक्स मुक्त - "छवि जानकारी"
इन्टरनेट एक्सप्लोरर - "गुण"
यी अवस्थामा सबै यी विकल्पहरू क्लिक पछि जहाँ तपाईं इच्छित नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो को नै ठेगाना खुलेको गरिनेछ।
त्यहाँ पत्ता लगाउन कसरी आईडी Vkontakte को एक सरल संस्करण हो। दायाँ मानिस पृष्ठ साइन र स्रोत कोड खोल्नुहोस्। यो एक दायाँ-क्लिक आवश्यक र ड्रप-सूची "वस्तु जाँच गर्नुहोस्" वा चयन "स्रोत कोड।" स्रोत पत्ता Ctrl + यू थिचेर पृष्ठ खुल्छ जब द्वारा सम्भव छ। फेरि Ctrl + ई प्रेस र जहाँ डिजिटल मूल्य आईडी नम्बर हो वर्तमान अभिव्यक्ति मूल्य = «123456", हुनेछ लाइन प्राप्त।
कहिलेकाहीं प्रश्न तपाईं कसरी आईडी Vkontakte, सट्टा ब्राउजर पत्र सेट द्वारा निर्धारित संख्या भने, प्रयोगकर्ता प्रतिबन्धित छ पृष्ठ पहुँच गर्दा थाह, उठ्छ। यस मामला मा, तपाईं पहिले अवतार क्लिक दायाँ क्लिक गर्नुहोस्, र प्रयोग ब्राउजर आधारमा छवि गुण मेनु खोल्न छानेर, वर्णन रूपमा, कार्य गर्न आवश्यक छ।
अक्षर, र पृष्ठ पहुँच मा लगाएको प्रतिबन्ध - बरु संख्या को यदि म कसरी थाह आईडी Vkontakte? निम्नानुसार हामी अगाडि बढ्नुहोस्। एक पृष्ठमा प्रयोगकर्ता जाने र सन्देश पठाउन अवतार बटन अन्तर्गत छ। हामीले वस्तु "प्रतिलिपि ठेगाना" खोज्दै सूचीमा दायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस्, यो बटनमा कर्सर निर्देशन दिन्छ। यो सन्दर्भ मा नवीनतम तथ्याङ्कले बस व्यक्तिगत नम्बर हो। यसलाई आफ्नो ब्राउजर को ठेगाना पट्टी मा लिङ्क गर्न मात्र रहनेछ। तपाईं त ब्राउजर पट्टी तपाईं सही नम्बर हेर्न हुनेछ, सन्देश पठाउन थिच्न सक्नुहुन्छ।
, माथि देखि देख्न सकिन्छ रूपमा साइटमा नवाचारै बावजुद, तपाईं सधैं एक विकल्प, तपाईं अर्को प्रयोगकर्ता कसरी थाहा आईडी Vkontakte फेला पार्न र लुकेको आफ्नो पृष्ठ हेर्न सक्षम हुन सक्छ।
कसरी एक ल्यापटप ड्राइभर स्थापना गर्न सिक्न
कसरी पावरपोइन्ट मा एक प्रस्तुति बनाउन: सुझाव र सर्वश्रेष्ठ अभ्यासहरू
कार्यक्रम। विकल्प चक्र
आकर्षण STERLITAMAK (Bashkortostan): विवरण
Uzvar: तत्संबंधी सुकेको फल र मिठाईहरू देखि संतृप्त पेय नुस्खा
TTG। रगत हर्मोन स्तर मा आदर्श
Landfills: लाइसेन्स र निर्माण